Ihuigwe phobias adị | Netwọk Mgbasa Ozi
Enwere oge nke afọ mgbe ndị mmadụ na-enwe nkụda mmụọ, na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ ma na-enweghị ike ịnọdụ n'ọnọdụ dị iche iche ha hụrụ onwe ha. Ọtụtụ n'ime ọnọdụ ndị a nwere ike ime n'ihi gbanwere oge.
Ihe dị iche iche dịka awa nke ìhè na njedebe nke ụbọchị, mgbanwe nke oge, ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ bụ anyanwụ ma ọ bụ na-erughị ya kpatara ụfọdụ nsogbu na-emetụta mmadụ. A na-akpọ ha nsogbu nsogbu oge ma na-emetụtakarị ma ọ bụ ihe na-erughị 15% nke ndị bi na. Agbanyeghị, nke a bụ ihe a na-ahụkarị, mana enwere ọnụọgụ pere mpe nke ndị bi na-egosipụta ụdị ụjọ ma ọ bụ ụjọ tupu ụfọdụ ọnọdụ ihu igwe na-eme n'oge nke afọ. Ndi oku ihu igwe phobias
1 Ihuigwe phobias
2 Mgbaàmà na ndị mmadụ na-arịa ya
3 Isi ihe na-akpata ihu igwe phobias
4 Ọgwụgwọ maka ndị a
Dịka ọmụmaatụ, enwere ụdị ihu igwe nke ihu igwe, nke ọtụtụ mmadụ bụ ikpe mara mma nke ukwuu ma ọ bụ ọnọdụ ịhụnanya maka ndị di na nwunye, dịka ụjọ nke ọnwa zuru oke (selenophobia). Igwe phobias ndị ọzọ dịkwa ịtụnanya na maka ọtụtụ mmadụ bụ ndị mara mma ma nwee mmasị bụ ụjọ maka chi ọbụbọ (eosophobia) na ọkụ mgbago ugwu (auroraphobia).
Mar Gomez, bụ ọkà mmụta ihu igwe maka Oge bụ ma kọwaa ụfọdụ nsogbu nsogbu mmụọ ndị a na-enwe. Ihe maka onye ọ bụla mara mma ma nwee mmasị, n'ihi na ndị a bụ ihe na-akpata nchekasị. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ bụ ihe ụfọdụ mere mmadụ ji atụ ụjọ a nke na-eduga onye ahụ inweta ọnọdụ ndị a nke ezigbo nchegbu. Ya mere, Mar na-atụ aro ka ndị mmadụ na-arịa ụdị ụjọ a na-etinye onwe ha n'aka ndị ọkachamara ma ghara ịnwa ịnwa ụdị ọrịa a naanị.
Mgbaàmà na ndị mmadụ na-arịa ya
Iji mata onye na-arịa ụdị ụjọ a, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị na-agwọ ọrịa emeela ụfọdụ ọmụmụ na nyocha dị iche iche. Igwe phobias ndị a na - esochikarị oge mgbanwe ma ọ bụ tachycardia. N'ozuzu, onye na-arịa ya na-eche na obi ha na-akụ ngwa ngwa, na-amalite ọsụsọ nke ukwuu ma nke a na-eduga na nhụjuanya nke nwere ike ịghọ dị ize ndụ na ahụ ike.
Nsogbu nke phobias ndị a, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, bụ na a na-ebukarị ha na nzuzo. Ọtụtụ mmadụ na-eme ihere ịza ajụjụ na ịkọwa phobias ha na ndị ọzọ maka ụjọ ịkwa emo ma ọ bụ ịnabata ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere na nsogbu ndị a amachaghị nke ọma. O yikarịrị ka ọ bụ n'ihi amaghị ihe a zuru ebe niile, ọnụọgụgụ ndị na-arịa phobias ndị a karịrị ihe a maara.
La meteorosensitivity, aha ya n'elu, metụtara mgbanwe n'oge, oge ìhè anyanwụ, wdg. Nke ahụ na-akpata mgbanwe n'ọnọdụ ndị mmadụ. Ha na-emetụta 15% nke ndị bi na ọ na-abụkarị ndị nkịtị. Enwekwara ụfọdụ ihe omimi nke ihu igwe maka ụfọdụ ọrịa anụ ahụ dịka mgbu na nkwonkwo, mọzụlụ, migraines na ndị ọzọ.
Isi ihe na-akpata ihu igwe phobias
Otu n'ime ha bụ ihe nketa. Ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna nwere ya, enwere ohere na ọgbọ ọzọ ga-enwetakwa ya. Ha dịkwa adị n'ihi ụdị nsogbu ọ bụla na ndụ onye metụtara ya ahụmahụ na-adịghị mma N'ụbọchị mmiri ozuzo, oké ifufe, ma ọ bụ ọnwa zuru ezu.
Imirikiti phobias ndị a na-eme mgbe ha dị obere, ihe dị ka afọ ise na nke kachasị dịkarịsịrị egwu bụ ọnwa ọnwa zuru oke, àmụ̀mà, oke mmiri ozuzo ma ọ bụ oke ifufe. Nke ikpeazụ a bụ ihe nkiri site na sinima. N’ọtụtụ ihe nkiri ndị na-emenye ụjọ, n’ihe nkiri ndị ahụ na-emenye ụjọ ma dị egwu, ọdịdị ala gbara ọchịchịrị, ọnwa zuru ezu, ma ọ bụ àmụmà.
Ọgwụgwọ maka ndị a
Iji na-emeso ụjọ ndị a, e nwere usoro ọgwụgwọ dị iche iche. Otu n'ime ha bụ mmuta ihe omuma. Ọ na-agụnye onye ọrịa na-anata n'aka ndị ọkachamara pụrụ iche ozi niile gbasara ihe ịtụ ụjọ ha, nke mere na n'ụzọ dị otu a, onye ọrịa ahụ nwere ike ịhụ ya dị ka ihe na-adịghị njọ ma hụ phobia ha dịka ihe enweghị isi.
Ọzọ bụ ọgwụgwọ na-ekpughere nke nta nke nta nke onye ọrịa ji nwayọ na-abịaru nso ihe gbasara ihu igwe dị na ajụjụ, na-enwe ọnọdụ ebe ọ na-ahụ ya n'onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụjọ na-atụ àmụmà, jiri nwayọ gafere n'akụkụ windo iji hụ ya mgbe ị nwere mmetụta na-echebe ma dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihu igwe phobias dị
Ndewo German! Enwere m mmasị na edemede gị ma ọ chọpụtala ozi ọhụụ gbasara ihu igwe, eziokwu bụ na echetụbeghị m na mmadụ nwere ụjọ na-enweghị isi banyere ụfọdụ ihe ọhụụ ihu igwe ... mana n'ezie ha nwere ike ịdị. Otu nke m na-aghọtaghị nke ọma etu ọ nwere ike isi tolite bụ Eosophobia, ịtụ ụjọ maka ọwụwa anyanwụ, ya bụ, kedu mgbe ị ga-esi nweta egwu ahụ? n'ihi na ọ na-esiri m ike ịghọta ya, ma eleghị anya, ọ dịghị onye nwere ya ma ọ bụ na ọ na-ewere ọnọdụ na ụdị obodo ndị ọzọ nke ọwụwa anyanwụ pụtara ihe dị iche ... Amaghị m. Ọ bụrụ na ịmara otu ikpe ọ ga-atọ gị ụtọ.
Ndị ọzọ phobias ahụ dị m ezi uche, na-atụ egwu oke ifufe, echere m na ọ nwere ike bụrụ nke ọma na mba dịka Spain ebe ọdachi na-eme site n'oge ruo n'oge n'ihi oyi oyi ma ọ bụ oke mmiri ozuzo (Biescas…).
I kwesiri ime ihe ozo mgbe ndi mmadu nwere obi uto na otu n’ime ihe omuma ndia, dika ndi na-achu oku, na ha bu nro n’ime ha.
Ezi oru na daalụ.
Ezigbo Gerardo, daalụ maka okwu gị na mmasị gị. Echere m na ọ bụrụ na ụfọdụ phobias na-etolite n'ihi nsogbu nwatakịrị, ọ nwere ike bụrụ na ụfọdụ ndị yiri ka ha nwere ụjọ nke ọwụwa anyanwụ amalitela site na ahụmịhe nhụsianya mgbe ọwụwa anyanwụ dị n'azụ.
Ana m ewere echiche ahụ n'aka gị, ọ ga-adị mma ịde post banyere ndị mmadụ na-adọrọ mmasị na ọnọdụ ihu igwe.
Ihe Na-eme Mgbe Antarctic Ice na-agbaze